St. Michael’s Catholic Church - Catholic Archdiocese of Yangon
Fr. Blasius Saw Stee Noo(Pastor).
RCM Church Bayaintnaung Road Gyobingauk, Bago Division, Tel.: +95 (0)53 50152 Mobile: +95 (0)9 517 8031.
Daily Masses: 6:00 a.m. (Myam., Kayin, Eng. alternatively).
Sunday Masses: 7:00 a.m. (Myan.)
Being the center of the parish, Gyobingauk town is about 150 miles north of Yangon city. It is situated at the Yangon-Pyay Highway. Transportation is good and can be reached both by train and by car.
This Mission is an old mission being established in 1890 by Fr. John Baptist Eugenus (MEP). The Church was blessed in 1915. As many as 25 Priests have passed through serving here. There are about 92 villages with 25 out-stations. There are 5000 Catholics. They are all ethnic Kayins.The Boarding has been running since the 1960s. Many people were trained and educated from this Boarding house. There are5Catechists,2Religious Sisters and 1 priest giving their services in the Mission and Boarding.
ကြို့ပင်ကောက်မြို့သည် ရန်ကုန်မြို့၏ မြောက်ဘက်မိုင်၁၂၀-ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး၊ ရန်ကုန်ပြည် အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။သာသနာနယ်သည် ရှေးကျသောသာသနာနယ်တခုဖြစ်ပြီး၊ ၁၈၉၀-ခုနှစ်၌ Rr.John BptistEunenjus(MEP) ဘုန်းတော်ကြီးမှ အစပြုခဲ့သည်။ လက်ရှိဘုရားကျောင်းကို ၁၉၁၅-ခုနှစ်၌ ရေစက်ချကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီး၊ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဆက်ဆက်၂၅-ပါးရှိပြီးဖြစ်သည်။ ရွာပေါင်း၉၂-ရွာရှိပြီးကျေးရွာ၊ ဘုရားကျောင်း၂၅-ခုရှိလေသည်။ ဘာသာဝင်ဦးရေ ၅၀၀၀-ခန့်ရှိပြီး တိုင်းရင်းသားကရင်လူမျိုးများဖြစ်သည်။
ဘော်ဒါကျောင်းကို၁၉၆၀-ခုနှစ်မှ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ဤကျောင်းတော်မှ ပညာတက် အများအပြားကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ယခုလက်ရှိ ကျောင်းထိုင်တစ်ပါး၊ လက်ထောက် ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး၊ သီလှရှင် (၃)ပါး (SFX) နှင့် ဓမ္မဆရာ (၇)ယောက်၊ ဓမ္မဆရာမ (၈)ယောက်တို့ သာသနာမှုကို ထမ်းရွက်လျက်ရှိပါသည်။